musha NYAYA DZEEEOPEAN Aaron Wan-Bissaka Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Aaron Wan-Bissaka Utano Nhau Plus Untold Biography Facts. Chikwereti kuTheSun uye Forbes
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti genius nezita rezita "Spider". Our Aaron Wan-Bissaka Utano Nhoroondo pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya- Kuongorora
Hongu, munhu wose anoziva nezvekwanisiro rake yekubvisa tambo dzakanaka. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezvehupenyu hwaAaron Wan-Bissaka hunofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Aroni Wan-Bissaka akaberekwa musi we 26th waNovember 1997 kuLondon Borough Croydon muEngland. Ndiye wechipiri wevana vaviri vakazvarwa naamai vake, Elizabeth uye kuna baba vake, Ambroise.
Vabereki vaAron Wan-Bissaka Ambroise naErizabheti. Credits: The Sun.
Nyika yeBritain neCongo yevanhu vemahedheni neAfrica midzi yakakwidzwa nevabereki vose kuNew Addington muCrodon, kwaakakura pamwe chete nehanzvadzi yakwegura yainzi Kevin.
Aaron Wan-Bissaka akakurira Addington muCrodon pamwe chete nemukoma mukuru Kevin (Kuruboshwe). Chikwereti: The Sun.
Kukura kuNew Addington, Wan-Bissaka kwaiva nechirwere chekutamba bhora kubvira pazera rakanyanya. Rudo rwake pamutambo uyu rwakanga rusinganzwisisiki uye rwakawanda chero rupi zvarwo rwakakonzerwa nekukwevera kwesimba rinokonzera kusanganisira imba yake yekugara.
Somugumisiro, dzimwe dzimba dzisingagadziki muimba yekuraramo, kusanganisira gorosi rakagadziriswa kabhinhire inoparadza mari yechidiki yeWan-Bissaka yebhokisi remukati mhepo inoedza.
Muduku Aaron Wan-Bissaka akaputsa girazi rino reklasi kuburikidza nokutamba bhora muimba yekurara. Credits: Zuva uye The Sun.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Dzidzo neKubata Buildup
Chidzidzo cheN Wan-Bissaka chinosanganisira zvidzidzo zvake paGood Shepherd Catholic Primary & Nursery School muNew Addington, England. Paaiva kuchikoro, Wan-Bissaka akabatanidza vadzidzisi uye vachitamba bhora kuchikoro, mumapaki uye mumigwagwa.
Wechiduku Aaron Wan-Bissaka ari kutamba bhora pane imwe nzvimbo isingazivikanwi. Chikwereti: The Sun.
Nenguva iyo Wan-Bissaka aive akwegura 11, tarenda yake yakava pachena, ruzivo rwakazivisa kunyoresa kwake paCrystal Palace academy uko akatanga basa rake kuvaka mubhokisi.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Basa Rokutanga Upenyu uye Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Crystal Palace yakatanga kuva chikwata uko Wan-Bissaka achishandisa mari yehuduku hwake hwose. Zvisinei, rwendo rwacho rwakange rusina kufanana nemakakatanwa ezvinyorwa zvinyorwa zvinoshandiswa mune iri bio.
Makore maviri pasi mugwagwa, Wan-Bissaka aizotadza kurovedzwa kana kuzomuka achiona achitya chaizvo. Kuita kuti zvinhu zvive zvakaoma, iye zvino 14 ane makore ane chivande akatora kudya kusina kunaka kwakange kune coke, zvinotyisa, chicken uye chips.
Wan-Bissaka akazvivanza nechivande nekudya kwakashata panguva yake yekutanga.
Pamusoro pezvakaipa zveWan-Bissaka, Crystal Palace akafunga kumusunungura. Zvisinei, musangano pamwe nababa vechidiki - Ambroise - vakaita kuti academy imupe mwedzi mitatu yekuongororwa.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Kumuka Mukurumbira Nhau
Kushandisa zvakanaka nguva yekuongororwa, Wan-Bissaka akafadzwa zvikuru uye akamuka mumatanho emakore anotevera 5-2011). Kufambira mberi, Wan-Bissaka akatanga kutarisana neTristal Palace yekutanga yechitambo muzhizha re 2016 pre-season season paritamba mune shamwari dzakawanda.
Akagadzira chikwata chake chekutanga che Crystal Palace panguva yePremiership League mushure meTittenham Hotspur musi wa 25th waFebruary 2018 uye akapiwa muzvikamu zvezvikwata zvinotevera. Hazvina nguva refu asati atumidzwa zita rokuti Crystal Palace mutevedzeri weMwedzi weChris 2018 uye pakupedzisira akazova mutambi wechikwata cheZuva ra 2018 / 2019. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Wan-Bissaka akatumidzwa kuti Crystal Palace mutambi we 2018 / 2019 Season. Chikwereti: Premier League.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Relationship Life Facts
Wan-Bissaka achiri kutoroora panguva yekunyora iyi bio. Isu tinokuudza chokwadi pamusoro penyaya yake yekuroorana uye iye zvino hukama hwehukama. Kutanga, Wan-Bissaka haazivikanwe kuti akambotaura chero mukadzi, uye haanawo musikana waMay 2019.
Aaron Wan-Bissaka asina kuroorwa saMay 2019. Credits: LifeBogger uye 90Min.
Asi zvisinei, hapana kukanganisa chokwadi chokuti Wan-Bissaka ari kutsvaga nevakadzi. Zvisinei, iyo Crystal Palace academy yainge isina mwana kana kuti mwanasikana kana kunze kwekuroora inonyanya kufunga nezvekutora basa rake kunzvimbo dzakakwirira.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Wan-Bissaka inobva kumhuri yakadzika yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Pamusoro peAna-Bissaka waBaba: Ambroise ndibaba vaNun-Bissaka. Baba vanobatsirana vaviri ndivo vari kuCongo avo vaigara vachitamba nhabvu kumapoka emunharaunda mavo vasati vatiza nyika yeAfrica yakaparadzwa mugore 1997. Akaropafadzwa kuburikidza nekukwanisa kuita basa rekupa zvibayiro kuitira kuti vanakomana vake vauye kuzodzidzira bhora munguva yavo yepakutanga.
Aaron Wan-Bissaka nababa vake Ambroise. Chikwereti: The Sun.
Neamai vaNun-Bissaka: Amai Elizabeth van Wan-Bissaka. Kufanana nemurume wake nevana, Erizabheti ari Gunner kana kuti fan of Arsenal. Zvisinei, anotsigirawo Crystal Palace achifunga kuti ndiyo yaiva kirabhu yakaunza mwanakomana mukurumbira. Akaropafadzwa kupa Wan-Bissaka zvakanakisisa zvekutarisira vana pamuviri munguva yehupenyu hwake hwepakutanga uye kupa rubatsiro rwetsika kana achida zvikuru.
Aaron Wan-Bissaka naamai vake Erizabheti. Chikwereti: The Sun.
About Wan-Bissaka's Siblings: Wan-Bissaka haana hanzvadzi (s) asi hama yakwegura inonzi Kevin. Vanin'ina vacho vose vakakurira vachitamba mutambo mumugwagwa uye pamapaki. Zvisinei, Kevin haana kunyora mubhizimisi rekiki guru. Akatamba kana Kingstonian uye Walton Casuals vasati vasungirira zvikwama zvake munguva ye21.
Aaron Wan-Bissaka mukoma weKevin akaona 2nd kubva kurudyi muMufananidzo wemhuri. Chikwereti: The Sun.
About Wan-Bisaka's Relatives: Ari kure nemhuri yaN Wan-Bissaka, zvishoma zvinonyatsozivikanwa pamusoro pekurukuru nababa vake pamwe nababamunini vake navanamai vake. Mukuwedzera, Wan-Bissaka vanamainini, vanamainini nevamunun'una vavo vanenge vachiri kuzivikanwa mune zviitiko zvinokosha zvehuduku hwake nenyaya yehupenyu. Same anoenda nebhodhi kune vana varo nevanin'ina.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Personal Life Facts
Chii chinokonzera Wan-Bissaka kutsigira ?. Gara shure apo tinokuunzira maitiro ehupenyu hwa Wan-Bissaka kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga, Wan-Bissaka's persona inosanganiswa neSagittarius Zodiac.
Anotsunga, anoziva, anofungidzira uye anonyatsorondedzera zvakajeka zvehupenyu hwake hwega uye hwega. Anongova nezvinhu zvishoma uye zvinokuvaraidza zvinosanganisira kugadzira, kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kushambira.
Kushambira ndechimwe chezvinhu zvekushanya zve Wan-Bissaka. Chikwereti: Instagram.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Lifestyle Facts
Wan-Bissaka net-worth-inotarisirwa pasi pekuongororwa panguva yekunyora. Zvisinei, ane kambani inokosha ye € 25,00 Million. Kuongororwa kwemazuva ose ekubhadharwa kwemari uye kushandiswa kwemararamiro kunoratidza kuti anorarama mararamiro anochengetedza evhareji anowanikwa nehuwandu hwemari yaanowana iyo yakabva kumupira waro.
Panguva iyi, zvishoma zvinonyatsozivikanwa pamusoro pezvakakosha zveimba iyo yaanogara uye pamwe chete nemotokari yake yekuunganidza sezvaasingawanzofambidzwe motokari kuenda kumisasa yekudzidziswa kana kuenda kune zvikomborero. Kunyangwe zvakadaro, anoziva kupedza nguva dzezororo munzvimbo dzinodhura dzinodhura pasi rose.
Aaron Wan-Bissaka akaonekwa achifara pazororo rake muDhailand. Chikwereti. Instagram.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Untold Facts
Kuputira huduku hwedu hweWan-Bissaka hunofananidzira kuti haazive kana kuti zvishoma zvinyatsozivikaniswa izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwake.
Wan-Bissaka ane tattoos asinganzwisisiki ayo ane zvaanoreva achiri kuzivikanwa sapanguva yekunyora.
Anonyanya kutsvaga nemakwikwi ebhola makuru kusanganisira Manchester United, Chelsea neManchester muguta panguva yekunyora.
Aaron Wan-Bissaka ane nguva munguva pfupi yapfuura akafarira zvinotungamira mauto emitambo. Chikwereti: Daily Express.
Nezvechitendero chake, Wan-Bissaka akazvarwa uye akarererwa semuKristu. Kunyanya zvakadaro, akapinda chikoro cheKaturike. Zvisinei, iye achiri kutaurirana pamusoro pezvinhu zvekutenda.
Rutsoka rwakarurama nderimwe rwevatambi vashomanana vasati vamboonekwa kunwa kana kusvuta.
Aaron Wan-Bissaka Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Video Summary
Ndapota ona pasi apa, yevhidhiyo yeVideo Yedu yeIndaneti yemufananidzo uyu. Nomutsa Enda uye Unyore kwatiri Youtube Channel kune mamwe mavhidhiyo.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga Aron Wan-Bissaka Child Child Story uye Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Dominic Calvert-Lewin Childhood Nyaya Yakanyanya Plus Untold Biography Facts